Foundation အသစ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေကိုဖတ်သွားဖို့မမေ့နဲ့နော် | CosmeticMyanmar
Home » Article » Foundation အသစ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေကိုဖတ်သွားဖို့မမေ့နဲ့နော်
Foundation အသစ်ဝယ်တော့မယ်ဆိုရင် ဒါလေးတွေကိုဖတ်သွားဖို့မမေ့နဲ့နော်
Foundation ဝယ်လာပြီးတိုင်း အဆင်မပြေတဲ့ ကိစ္စ, အရောင်မကိုက်တဲ့ ပြဿနာကတော့ မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့ သူတိုင်းကြုံဖူးမှာပေါ့နော်? ဝယ်လာတဲ့ အရောင်က အသားထက် ဖြူနေတာတို့, ပိုညိုသွားတာတို့က မဆန်းတော့ဘူးလေ။ ဒီတော့ ပိုက်ဆံတွေကုန်ပြီး မိမိနဲ့ အဆင်မပြေတော့ စိတ်ညစ်ရတာပေါ့။ ပျိုမေတို့ ကြုံနေရတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ admin က foundation သွားဝယ်ရင် သိသင့်တဲ့ tips လေးတွေကို ဖွင့်ချလိုက်တော့မယ်နော်။
အဆီပြန်တဲ့ အသားရေလား? ခြောက်သွေ့တာလား? combination လို့ခေါ်တဲ့ ပေါင်းစပ်အသားရေလား? ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိတ်ကပ်အမျိုးအစားက skin type အလိုက်ထုတ်ထားတတ်လို့ပါ။ ကိုယ်က အသားခြောက်တာကို matte type foundation ဝယ်လာမိတာမျိုး။ ပြီးတော့ ကိုယ်ကအဆီပြန်တယ် သူများတွေက ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်တာကိုအားကျပြီး လိမ်းကြည့်လိုက်တော့ အဆီတဝင်းဝင်းဖြစ်နေတာမျိုး တွေကို မကြာခဏမြင်ဖူးလို့ပါ။ အသားရေကို သေချာလေးပြောပြပါ။ သူများတွေကောင်းတယ်ပြောတိုင်းမဝယ်လိုက်ပါနဲ့။
ဘာလို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ ကိုယ်က နေ့စဉ်လိမ်းမှာလား? တစ်ခါတစ်ရံပွဲတက်မှလိမ်းမှာလား သေချာသိရင်ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ မိတ်ကပ်သားကို ပါးပါးလေးကြိုက်တာလား? မိတ်ကပ်သားထူထူလေးနဲ့ အသားတက်လာတာကို ကြိုက်တာလား? ကိုရီးယားမလေးတွေလို ပါးပါးလေးကြိုက်တာကို ဝယ်လာမိတာက ထူထူပိန်းပိန်းကြီးဖြစ်နေတာမျိုး, မိတ်ကပ်သားထူတာကြိုက်တာကို အရောင်သိပ်မတက်တဲ့ foundation ဝယ်လာမိတာမျိုးတွေက အဖြစ်များလို့ပါ။
အရင်တည်းက အယူအဆမှားနေကြတာတစ်ခုကတော့ foundation ကိုလက်မှာစမ်းတာပါ။ လက်ရဲ့အရောင်နဲ့ မျက်နှာအရောင်က ဘယ်လိုမှမကိုက်ညီနိုင်ပါဘူးနော်။ အရောင်းကောင်တာကသူတွေကတော့ လွယ်လွယ်ကူကူစမ်းပေးလိုက်တာဖြစ်ပေမယ့် ကိုယ်က သေချာရွေးရမှာပါ။ ကဲ ဒီတော့ဘယ်မှာစမ်းမလဲ? မေးရိုးမှာစမ်းလို့ရပါတယ်။ မေးရိုးဆိုတာက လည်ပင်းနဲ့ မျက်နှာအရောင်ဆုံတဲ့နေရာဆိုတော့ အဲ့နေရာမှာok ရင် မျက်နှာအတွက်လည်း ok! မိတ်ကပ်တွေလိမ်းလာခဲ့ရင်လည်း wet tissue လေးနဲ့ စမ်းမယ့်နေရာကိုဖျက်ပြီး လိမ်းလို့ရပါတယ်။
ပြီးတော့ အရောင်အပိုင်း! တကယ်လို့ ရွေးရခက်နေပြီဆိုရင် ဉပမာ- အရောင်က ၃ရောင်ဖြစ်နေရင် အဲ့၃ ရောင်လုံးကို အစဉ်လိုက် လိမ်းလိုက်ပါ။
ပုံထဲကအတိုင်း မြှားပြထားတဲ့အရောင်ကနဂိုအသားရောင်နဲ့ တစ်ထပ်တည်းကျနေလို့ မိမိနဲ့လိုက်ဖက်မှုအရှိဆုံးပါ။ တကယ်လို့ တစ်ထပ်တည်းကျတဲ့အရောင်မရှိခဲ့ရင် အနီးစပ်ဆုံးကို ရွေးလို့ရပါတယ်။ ဘယ်ဘက်ကရေရင် ၃ ရောင်မြောက်လိုမျိုးကို ရွေးနိုင်ပါတယ်။
🙍🏻‍♀️နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ foundation ကို ကိုယ်တိုင်ဝယ်တာမဟုတ်ဘဲ online shop တွေကနေမှာယူတာပါ။ ကိုယ်ကဒီအရောင်ကိုအမြဲလိမ်းနေလို့ ကုန်သွားလို့ မှာတာက ဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် အရောင်အသစ်ထပ်ဝယ်ချင်တာ, brand ပြောင်းသုံးချင်တာဆိုရင်တော့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဝယ်တာအကောင်းဆုံးပါ။ ဆိုင်တွေမှာဝယ်လို့ မိတ်ကပ်သားတက်မတက်သိချင်ရင် စမ်းလိမ်းကြည့်ပြီး shopping2ပါတ်လောက်ပတ်လိုက်ပေါ့ 😌 အနည်းဆုံး ၂ နာရီလောက်ကတော့အသာလေးပဲလေ😂
Music Festival သွားရတာကြိုက်တဲ့ပျိုလေးတွေအတွက် အလန်းဆုံးဖြစ်စေမယ့် ဆံပင်ပုံစံများ